Xukuumada oo ka hadashay in ay ka laabaneyso Dacwada Badda ee Kenya kala dhaxeeya – ASM Raage
Xukuumada oo ka hadashay in ay ka laabaneyso Dacwada Badda ee Kenya kala dhaxeeya
Posted byabdullahi87 May 8, 2021 Posted inwararka somaliga ah
Ra’isul Wasaare kuxigeenka Xukuumada Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa beeniyay in dowlada Soomaaliya ay ka laabaneyso kiiska dacwada badda ee kala dhaxeeya Dowlada Kenya xili la filayo in Maxkamada ICJ go’aan kasoo saarto.
Mahadi Guuleed oo ahaa masuulkii ugu sareeyay dowlada Soomaaliya ee hogaaminayay ergadii Soomaaliya ku mataleysay dhageysiga kiiska Dacwada badda ayaa cadeeyay in Maxkamada kiiskaasi go’aan rasmi ah kasoo saari doonto wadahadalna uusan jiri doonin.
“Muranka Badda waxaa dhameystiri doona ICJ kadib markii dhageysigii hadalka ahaa lasoo geba gebeeyeey March 15-18 ee sanadkan. Waxaan sugeynaa go’aan caddaalad ah. Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dalna waa arrin gaar ah,” ayuu yiri Mahdi Guuleed.about:blankAd by Valueimpression
Warkan kasoo baxay Dowlada ayaa kusoo aadaya xili saacadihii lasoo dhaafay soo baxayeen warar sheegaya in Soomaaliya iyo Kenya oo hada soo celiyay xiriirkooda kawada hadlayaan muranka badda ee labada dal u dhaxeeya ayna arintaasi fududeeneyso Qadar.
Ciidamada Yuhuuda ayaa Caawa xoog ku galay gudaha Masajidka Barakaysan ee Al-Aqsa kiiyoo lagu jiro Salaadii taraawiixda.
Deg Deg, Xaallad Cabsi xooggan leh ayaa ka taagan Waqooyiga dalka Sudan kadib markii la sheegay in uu gantaalkii shiinaha ee soo dhacay halkaas ku soo wajanyahay .